Izinhlobo ezihamba phambili zabesilisa - Izeluleko Zemfashini | Amadoda aSitayela
U-Alicia tomero | | Calzado, Izithako, imfashini, Amathrendi
Sizonikezela lesi sigaba kumikhiqizo yezingubo ezihamba phambili, lezo ezakha kakhulu umkhuba phakathi kwendoda enhle futhi lokho kugqama ngesitayela sabo. Asikwazi ukukhuluma ngamanani ashibhile, ngoba yimiklamo ekhethekile, ngezindwangu ezihamba phambili futhi zenziwe ngendlela yokuthi zibe nesitayela sazo.
Le mikhiqizo maka ngaphambi nangemva kwemfashini, Siyabonga kubo, kudalwa isitayela esigqokwa ngaleyo nkathi nokuthi bazakhele okwehlukile ekudalweni kwabo. Yize ekugcineni futhi sizobuyekeza ezinye zezimpahla zokugqoka zamadoda ezivame kakhulu futhi okulula ukuzithenga. Ngeke sigcizelele incazelo yabo, kepha bazoba yizimpawu okungabizi kakhulu kuwo wonke amaphakethe futhi ethandwa kakhulu phakathi kwama-fashionistas amancane.
1 Izimpawu zokugqoka zamadoda ezinhle kakhulu
1.7 Eminye imikhiqizo enesithunzi esikhulu
Lezi brand zinezici zazo ezihlukile. Njengoba sibuyekezile zikhethekile, ngamunye ngesitayela esikhethekile, okwabesilisa nabadala. Yize behlukile kweminye imikhiqizo yansuku zonke, kungenxa yokuthi banakho ukudala kwakhe i-haute couture nokunethezeka futhi bagqama ngoba bahlala behamba phambili njalo. Zonke zinemiklamo ehlukahlukene, kusuka ezikibheni eziyisisekelo, amasudi okugqoka, amabhulukwe ngisho nezingubo zangaphansi.
Lo mkhiqizo wenziwa nguMario Prada, umqambi wezimfashini wase-Italy. Isitayela sakhe sehlukile kusukela ayithandi ukulandela izivumelwano ezijwayelekile zemfashini, kunalokho, uziphindisela ngaphakathi kwesitayela sakhe. Unodumo olukhulu lomhlaba futhi uzuze lokho sibonga ikhwalithi yaso nendlela yaso yokwakha imiklamo yamahhala, yamadoda akhululekile. Futhi yenza izesekeli zemfashini njengezicathulo, izikhwama zesikhumba, kanye namakha.
Ingenye yemikhiqizo yokunethezeka ezinze eFlorence, e-Italy. Yazalwa ngo-1921 futhi kusukela lapho ayikaze iyeke ukukhula ngenxa yokunethezeka nokudalwa kwayo kwasekuqaleni. Amamodeli abo alingiswa kabanzi ngokokuqala kwawo, nemikhiqizo yawo zingezesitayela esiwubukhazikhazi futhi zinezinto zokunethezeka. Okufanele kakhulu ukwakheka kwayo yizindatshana zesikhumba, zihlala zakha izinto ezintsha ukuze zivumelane nekhulu lama-XNUMX leminyaka.
Kukuzikhundla zokuqala zohlu kwezemfashini. Impela iyi- idizayini ehamba phambili yekhwalithi nokuklanywa kwayo. Intengo yayo ishibhile kakhulu kunemikhiqizo ethile futhi inikela ngamadoda izesekeli ezahlukahlukene, okokugqoka kanye namakha. Uhlobo lwakhe oluhle kakhulu lube ne "Polos" eyaziwayo, eyizwi lakhe elinikeza incazelo kule ngubo, ejwayelekile futhi ephelele njalo.
Isiginesha yakhe yafika phakathi neMpi Yezwe II, ngo-1924, lapho aqala khona ngokukhethekile ngemifaniswano. Inikeza izingubo ezingajwayelekile, ngoba imele ulayini wezingubo zemidlalo onokuthintwa okungakahleleki, kepha futhi inenguqulo yayo stylish. Izingubo ezenziwe ngobuciko zenzelwe osomabhizinisi, ngesitayela nobuntu. Asikwazi ukukhohlwa ngezabo amakha akudala, eziningi zazo ezinephunga elikhethekile, eliyingqayizivele nelisetshenziswa.
Umkhiqizo wemfashini owenziwe nguPierre Bergé ngo-1961. Ungowokudabuka eFrance futhi ungomunye wemikhiqizo ehlonishwa kakhulu emhlabeni jikelele. Usebenzisa isitayela sesimanjemanje futhi esingajwayelekile ezinhlobonhlobo zakhe, Iphinde imake isimilo sayo, ihlale inohlobo oluthile lwesici esimele isitayela sayo. Kugcizelela kahle nentsha, nohlobo lwayo oluhlubukayo negatsha le-punk, kodwa okunethezeka. Yize futhi inolayini wayo wesitayela esijwayelekile nenhle kuyo yonke iminyaka.
Ungumdali omkhulu wemfashini yamadoda, eyenzelwe ikakhulukazi ukuthuthukisa amandla amahle womuntu Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini egqama kakhulu? Umkhiqizo uzuze ingxenye yodumo lwawo ku- ukukhiqizwa kwamapotimende nekhwalithi ephezulu. Zibuye ziqhakambise izikhwama ezinhle kakhulu, izicathulo, izesekeli ezifana nobucwebe nakho konke okwenziwe ngesikhumba esezingeni eliphakeme.
Eminye imikhiqizo enesithunzi esikhulu
Asikwazanga ukukhomba yonke imikhiqizo ephambili kanokusho ekhona emakethe. Impela sishiye abanye ukuthi babuyekeze, kepha nazi ezinye udumo olufanayo: UBerluti, uDior, uGiorgio Armani, uTom Ford, uBurberry, uCalvin Klein, uPaul Smith, uBrioni, uHermes… Ngokungangabazeki yibo abahamba phambili, abaningi babo abaziwa amashumishumi eminyaka futhi bebelokhu baziwa ngesitayela sabo, ukunethezeka nekhwalithi ephezulu.
Ngaphandle kokungabaza, kukhona okungapheli nezinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo eyenzelwe okwezingubo zabesilisa. Lezi esizibuyekezile zibaluleke kakhulu futhi zivelele phakathi kwezinhle kakhulu emakethe yokunethezeka. Noma kunjalo, sinemikhiqizo ehamba phambili emakethe, nge izingubo ezisezingeni eliphakathi nendawo ngamanani aphansi.
Phakathi kwazo singathola ULevi, uPepe Jeans, uTommy Hilfiger noma uWrangler. Ngakolunye uhlangothi, kukhona ama-franchise anemiklamo eyakhiwe kusuka kwezemfashini ezihamba phambili nangokulingiswa kwemikhiqizo ehamba phambili. Futhi bagqama ngokuthengisa kwabo okukhulu ngenxa yokukhululeka kwabo kokukhokha nokukhangisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Izimpawu zokugqoka zamadoda ezinhle kakhulu